प्रिमियर लिगमा अनपेक्षित नतिजा, के इपिएलले पाउला त नयाँ विजेता ? - सबै खेल
प्रिमियर लिगमा अनपेक्षित नतिजा, के इपिएलले पाउला त नयाँ विजेता ?
२० आश्विन २०७७, मंगलवार १२:५५ October 6, 20200Comments Aston villa, English Premier League, liverpool, manchester city, Manchester United, Tottenham
पत्याउनै गाह्रो हुने नतिजाको शृंखलाले देखाएको छ, यसपल्टको इंग्लिस प्रिमियर लिग अति साह्रो अनुमान लगाउनै गाह्रो प्रतियोगिता हुने छाँट छ । फरक परिस्थिति र वातावरणमा अहिले चलिरहेको प्रतियोगितामा हुन सक्छ, यसपल्ट अनपेक्षित विजेताको सम्भावना पनि रहेको छ ।
म्यानचेस्टर सिटीले गत सप्ताहन्त इतिहादमै लेस्टर सिटीको हातबाट पाँच गोल खायो । त्यस मैदानमा भएका ४ सय ३५ खेलमा सिटीले यति धेरै गोल खाएको यो पहिलोपल्ट थियो । लिभरपुल पनि के कम ? लिग च्याम्पियन टिम लिभरपुल एस्टनभिल्लासँग असाधारण रूपमा ७–२ ले पराजित भयो । यस्तोमा इंग्ल्यान्डको माथिल्लो डिभिजनमा च्याम्पियन टिमले सात गोल खाएको यो १९५३ यता पहिलो रह्यो ।
त्यतिबेला आर्सनलले सन्डरल्यान्डसँग यस्तै नियति बेहोरेको थियो । जे होस्, यसपल्ट सामान्य मान्न नसकिने स्थितिमा फुटबल चल्दैछ र गोलको त बहार नै आएको छ । लिभरपुलको त्यो खेल अगाडि म्यानचेस्टर युनाइटेड पनि स्तब्धपूर्ण हार बेहोर्न बाध्य रह्यो ।
टोटनहमले उसलाई ६–१ ले हरायो । यस्तोमा लिगको यो चरणमै मात्र ४१ गोल भए । गत महिना मात्र एकै चरणको खेलमा सर्वाधिक गोल भएको कीर्तिमान बनेको थियो, यस यसपल्टको संख्या त्यो कीर्तिमानबाट तीन गोल मात्र पछाडि रह्यो ।
अहिलेसम्मको प्रवृत्तिले देखाएको छ, प्रिमियर लिग वास्वतमै अनुमान नै गर्न नसकिने प्रतियोगिता भएको छ, अनि यसले लिगलाई आफैंमा बढी सनसनीपूर्ण पनि बनाएको छ । लिभरपुलका पूर्वरक्षक जेमी क्यारिघर भन्छन्, ‘म त लिग यस्तै होस भन्ने चाहन्छु ।’
उनले स्काई स्पोर्ट्समा भनेका छन्, ‘लिग जित्न ९५ अंक चाहिनु एक अर्थमा राम्रो हो, तर यसले लिग आफैंलाई भने राम्रो गरिरहेको थिएन् । मलाई कोही पनि टिमले ८० अंकको हाराहारीमा लिग जिते त्यो ठीक लाग्छ । त्यसको अर्थ विजेता टिमले पनि धेरै खेल हारेको हुनेछ र यसले लिगलाई वास्तवमै रोमाञ्चक बनाउने छ । अनि स्थिति पनि त्यस्तो हो, चौथोदेखि पाँचौं स्थानमा रहने टिम पनि धेरै पछाडि नहोस् । मलाई लाग्छ, यसपल्टको लिग वास्तवमै फरक हुनेछ ।’
कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण रंगशालामा दर्शकको उपस्थिति अझै हुन सकेको छैन । कहिले हुनेछ, त्यो पनि टुंगो छैन । यस्तोमा घरेलु मैदानको फाइदा लुप्त प्रायः भएको छ । घरमा आफ्नै दर्शक अगाडि जित्ने क्रम अब रहेन । धेरै गोल हुनु पछाडि अर्को पनि ठूलो कारण छ र यो हो, कम समयमा धेरै खेल खेल्नु पर्ने । टिमले त अचेल अभ्यासको मौका नै पाउन छाडेको छ, त्यसैले खेल नै अभ्यास हुन थालेको छ र यस्तोमा गोल पनि बढी निस्कन थालेको छ, वास्तविक अभ्यासमै जस्तै ।
अझ क्यारिघर त के मान्छन् भने अप्रत्याशित नतिजा अझ आउन बाँकी छ, हेर्दै जाऔं । गत सिजन एस्टन भिल्लाले अन्तिम दिन मात्र रेलिगेसन हुनबाट आफूलाई बचाएको थियो, अहिले यही टिमले च्याम्पियनलाई नराम्रोसँग माथ दिएको छ । फेरि अहिले लिग अंक तालिकामा को अगाडि छ भन्दा एभरटन छ । उनी भन्छन्, ‘यसपल्ट प्रि–सिजनका खेल पनि भएनन्, यसले पनि धेरै फरक पारेको छ ।’ एभरटनले सुरुआती चारै खेल जितेर सानदार सुरुआत गरेको छ ।
यो पनि अपेक्षित थिएन । खासमा कोही पनि प्रशिक्षकले टिम ढंगले बनाउनै पाएका छन् । अधिकांश टिमले आफ्नो रक्षापंक्तिलाई मजबुत नै बनाउन सकेको छैन । त्यसैले कारिघरको निचोड छ, ‘यसपल्ट हामीले फेरि एकपल्ट लेस्टर सिजन देख्न पाउन बेर छैन । हुन सक्छ, शीर्ष चारमा पनि अनपेक्षित टिम नै हुनेछन् । यो सब प्रिमियर लिगका लागि राम्रै हो ।’ सबैलाई थाहा छ, लेस्टरले सन् २०१५/१६ को सिजन अविश्वसनीय पाराले जितेको थियो ।
← ‘डेडलाइन डे’मा काभानीसहित युनाइटेडले भित्र्यायो चार खेलाडी
सडक दुर्घटनामा अफगान क्रिकेटर नजिबको निधन →
ठट्टा गर्दा डेले अली प्रतिबन्धमा
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ००:१० 0
सागका लागि नेपाली महिला फुटबल टिम घोषणा
२४ कार्तिक २०७६, आईतवार ००:०३ 0
प्रिमियर लिगका ७४८ खेलाडीको कोरोना परीक्षण, ६ जनामा देखियो संक्रमण
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १०:२० 0